Weerar ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Weerar ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo
Weerar ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen Kolonyo ay leeyihiin Ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM xilli ay ku socdaalayeen degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Weerarka oo isugu jiray qarax iyo mid toos ah ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Kaambooni iyo buur-gaabo oo ka wada tirsan gobalka Jubbada hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab.
Dadka degaanka ayaa waxaa ay ku warrameen inay maqlayeen jugta qaraxa iyo rasaas ay is weeydaarsanayeen labada dhinac, hayeeshee aysan weli sirami ah u xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Al-Shabaab ayaa Warra lagu qiray baraha Internet-ka ee taageera waxaa ay ku sheegteen inay weerarkaas ku gubeen Gaari Cabdi bille ah, sidoo kalena ay dileen Afar Askari oo ka tirsan Ciidamada Kenya wallow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya Warkaas.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Kenya ay iska sii wateen socdaalkooda, iyaga oo sidoo kale sameeyay howlgal Miino baaris ah, maadaama dhowr jeer lagu qarxiyay wadada u dhaxeysa degaannada Kaambooni iyo buur-gaabo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Inta badan degaannada iyo degmooyinka Gobolka Jubbada Hoose waxaa qaraxyo iyo weeraro toos ah lagula beegsadaa Ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland, wallow mararka qaar ay qaadaan weeraro ay la beegsadaan Xarumaha Al-Shabaab.
Previous articleBiden oo kordhiyay tirada Qaxootiga Sanadkii uu Mareykanka qaabilayo
Next articleMuwaadiniinta Sacuudiga oo laga qaadayo Xayiraadii Duullimaadyada Caalamiga